आज हङकङमा १,२७२ जना संक्रमित ६२ जनाको मृत्यु संगै १,५४४ जना निको भएर घरफर्के - Gulmeli Online TV
आज हङकङमा १,२७२ जना संक्रमित ६२ जनाको मृत्यु संगै १,५४४ जना निको भएर घरफर्के
३० चैत्र २०७८, बुधबार १८:०८
नारायण भण्डारी हङकङ १३ अप्रिल २०२२
हङकङमा कोरोनाको पाचौ लहर अव बिस्तारै ४ अंकबाट छिट्टै ३ अंकमा झर्नेवाला छ। आज १,२७२ कोभिड-१९ केसहरू छन जसमा ७३४ जनामा ​​न्यूक्लिक एसिड परीक्षण बाट र ५३८ Rapid Antigen Test (RAT) अनलाइन दर्ता गरेर पुष्टि भएका छन। पाँचौं लहरमा हालसम्म कुल १,१८१,६६४ जना संक्रमित भएका छन् । आज १२ वटा केसहरू आयात गरिएको थियो। तीमध्ये १० जना हिजो जर्मनी, नेपाल, फ्रान्स, सिङ्गापुर, सांघाई, भारत र अमेरिकाबाट आएका थिए ।
यसैबीच, खाद्य तथा स्वास्थ्यका उपसचिव डा.चुई टाक-यीले आज घोषणा गरे कि १९ अप्रिलदेखि मे ३१ सम्म ६० वर्षभन्दा माथिका वृद्धवृद्धाले ६८० तोकिएको स्थानबाट नि:शुल्क र्‍यापिड एन्टिजेन टेस्ट किटहरू लिन सक्नेछन। ७० वर्ष वा माथिका वृद्धवृद्धाहरूले पनि तोकिएका केन्द्रहरूमा नि:शुल्क न्यूक्लिक एसिड परीक्षण गराउन सक्छन। डा.चुईले नागरिकहरूलाई इस्टर होलिडेको समयमा सामाजिक दूरीका उपायहरू पालना गर्न अनुरोध गरेका छन।
नयाँ पुष्टि भएका ७३४ जनामध्ये १८० अस्पताल प्राधिकरणले पुष्टि गरेका छन भने थप १५० जना स्वास्थ्य विभागको जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट र बाँकी ४०४ निजी प्रयोगशाला वा सामुदायिक परीक्षण केन्द्रबाट प्रत्यक्ष पुष्टि भएका छन। परीक्षण गरिएका ३ सय ३५ मामिलाहरूमध्ये डेल्टा भेरियन्ट समावेश भएको कुनै पनि केस थिएन। ३३१ केसहरू ओमिक्रोन भेरियन्टमा समावेश थिए भने कम भाइरल लोडका कारण लगभग ४ केसहरू पत्ता लगाउन सकिएन।
आवासीय हेरचाह घरहरूमा कुनै नयाँ केसहरू रिपोर्ट गरिएको छैन।
पाँचौं लहरको शुरुवातदेखि हालसम्म जम्मा ८,७३५ (३,५८१ महिला र ५,१५४ पुरुष) बिरामीको मृत्यु भएको र कुल ६२ जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य प्राधिकरणले जनाएको छ । जसमध्ये ५४ जनाको सरकारी अस्पतालमा मृत्यु भएको छ । ११ महिनादेखि ११२ वर्ष उमेरका मृतक बिरामीहरू र तिनीहरूमध्ये ८ जना १८ वर्ष मुनिका थिए।
अस्पताल प्राधिकरणका डा. ल्यारी लीले अझै ९ हजारभन्दा बढी बिरामी अस्पतालमा भर्ना भइरहेका छन। अहिले सम्म, ६ बिरामीहरू हाल गम्भीर अवस्थामा थिए तीनीहरु मध्ये जनाले खोप लगाइएको र ती मध्ये ७ अझै गम्भीर अवस्थामा थिए। गम्भीर अवस्थामा रहेका ५४ जनाको सघन उपचार कक्षमा उपचार भइरहेको छ ।
अस्पतालहरू आज बिहान १२ बजेसम्म २४ घण्टा चल्छन। बिरामीहरूमा ५६ देखि १०६ वर्षका २४ पुरुष र ३० महिलाहरू छन। तिनीहरूमध्ये २१ आवासीय हेरचाह गृहका थिए।
थप रूपमा, यो पनि घोषणा गरिएको थियो कि त्यहाँ ४ पुरुष र ४ महिला समावेश गरी कुल ८ ढिलो रिपोर्ट गरिएको मृत्यु भएको थियो।
पछिल्लो २४ घण्टामा १ हजार ५ सय ४४ जना निको भएका छन् । यसैबीच भर्ना परीक्षणका क्रममा ३ जना बिरामीमा पोजेटिभ देखिएको छ ।
कतै तपाई हामी पनी बच्चाहरुको लागि बिशाक्त रवर फोमत प्रयोग गरेका छैनौ ?
हङकङ सरकारले कोरोनाको मापदण्ड केहि खुकुलो पार्दै खाना खाने समय राती १० बजे सम्म वार र पवहरु बन्द